Mepụtara dị ka video edezi software nke e mepụtara Apple, Final Cut Pro malitere ndụ dị ka software e mere iji mere mfe video edezi inweta maka video hobbyists na onwe ha filmmakers. Otú ọ dị, na-adịbeghị anya ike nke Final Cut Pro nwere, ghọrọ usoro budata na anyị na-ugbu a ịhụ isi Hollywood fim na-na-dezie na nke a software.
Ka na-anya na iri isi na fim na e degharịa iji Final Cut Pro.
Dabere na ịrị elu nke onu na anyị maara ugbu a dị Facebook, The Social Network starred Jesse Eisenberg, Andrew Garfield na Justin Timberlake. The nkiri rụrụ nke ọma n'ụlọ igbe ọrụ ma na-ghaghị natara site nkiri akatọ.
The film ndibọhọ ihe Academy Award maka Best edezi, anakọtara site Kirk Baxter na Angus Wall. Ha na-eji Final Cut Pro dezie film, na otu onye nke ihe ndị ha na n'ezie banyere software bụ ikike ime multiple timelines. Final Cut Pro E jikwa na nkiri a aka ihu nnọchi na a ọnụ ọgụgụ nke Ebeonodu. Abụọ nke isi odide na nkiri bụ ejima, na otú ahụ ka Mpaghara e filmed na-eme ihe nkiri (ndị na-abụghị ụmụ ejima) na mgbe ahụ edezi software e ji ike nro na ha bụ ndị ejima. Digital matte eserese bụ akụkụ ọzọ nke ihe nkiri a na dabeere na arụmọrụ nke Final Cut Pro.
2. The Girl na dragọn igbu (2011)
Nke a bụ US mmegharị nke mbụ Swedish film nke otu aha - dabeere na akwụkwọ site Stieg Larsson. Starring Daniel Craig na Rooney Mara, akụkọ bụ mpụ thriller agbalị ekpughe ihe nzuzo gbara ya gburugburu na ofufe nke a na-eto eto nwa agbọghọ si n'ezinụlọ bara ọgaranya.
Otu n'ime ihe ịma aka na ihe nkiri a bụ na e nwere ndị a otutu-apụghị ịhụ anya mmetụta ofụri nkiri. Final Cut Pro e ji mee iji nweta ogbugba stabilization na visual nkwalite - ihe niile si matte sere na-eke n'oge a kara aka ọcha dị ka snow.
A sayensị akụkọ ifo njem, a film rụrụ otú merụsịrị na igbe ọrụ na ọ mere isi nsogbu ego n'ihi na ya studio Disney.
The edezi nke John Carter nkiri bụ a esiri ka a otutu nke edinam otop ugboro abụọ n'oge nsogbu mmepụta. Ndị nchịkọta akụkọ Eric Zumbrunnen eji Final Cut Pro ka mpempe ndị dị iche iche ọcha ọnụ. Na a nnukwu nso nke CGI na e kere eke mmetụta obibi, edezi usoro na ihe nkiri a bụ nnọọ mgbagwoju. Final Cut Pro e ji ike a otutu nke ndabere zuru ezu mkpa iji mee ka ndị green ihuenyo Mpaghara ndụ.
4. 500 Days nke Summer (2009)
Nke a bụ a mara mma, quirky ihunanya ntochi starring Joseph Gordon-Levitt na Zooey Deschanel.
Edezi na nkiri bụ site Alan Edward Bell na DVCPro HD usoro na Final Cut Pro. N'ihi na storyline nke nkiri nekpughe na a na-abụghị linear usoro iheomume, na workflow atụmatụ nke Final Cut Pro mere ka ọ dịkwuo mfe jikwaa sequencing nke ndị dị iche Ebeonodu. E nwekwara ndị 250-apụghị ịhụ anya mmetụta nke e kere iji Final Cut Pro si edezi atụmatụ.
N'ịga n'ihu ndị X-Men aha, a na nkeji nkeji kọrọ Wolverine si na nwata na mmekọrịta ya na nwanne ya. Ọ bụghị n'ezie ịrịọ X-Men Fans ma ọ bụ nkiri akatọ.
Edezi na nkiri bụ site Nicolas De Toth na Megan Gill. E nwere ndị a ọnụ ọgụgụ nke continuity glitches mata n'oge mmepụta nke nkiri a ma De Toth na Gill eji Final Pro Cut na-a na-agbanwe agbanwe ekwogharị kọrọ. Gịnị bụ na-akpali banyere edezi na ihe nkiri a bụ na ihe nile na ọnwụ nke Mpaghara chọrọ e mere na Final Cut Pro 5, na-ewere uru nke software si HD ikike na kwa multi-clip atụmatụ.
6. Ọkụ Mgbe Reading (2008)
A nwa ntochi si nkà ụmụnna Joel na Itan Coen, ha dere, emepụta, dezie, na-eduzi ihe nkiri ahụ.
The Coen Ụmụnna na-Final Cut Pro on nkiri a n'ihi na ọ bụ dị mfe ma dị mfe iji - ha igbochi ọnụ ike ike he dị ka Mpaghara a nọ na-ogbugba, na Final Cut Pro nyere ha mgbanwe na ha dị mkpa dezie ngwa ngwa. On nkiri a kasị nke edinam otop iji Sony ese foto ma e nwere ọtụtụ Mpaghara na nke a-acha uhie uhie igwefoto e kwukwara mgbe ihe ọzọ igwefoto mkpa. Ọ bụ ezie na e nwere budata dị iche iche workflow n'etiti abụọ ụdị nke igwefoto, Uhie ihe onwunwe bụ ike na-ike were were na Sony footage.
7. Ọ dịghị Country maka Old Men (2007)
A neo-Western thriller si Coen ụmụnna. Ha duziri, dere, sị, ọ na-edekwa a mmepụta.
The nkiri na-nominated maka ihe Academy Award maka Best edezi maka nchịkọta akụkọ Roderick Jaynes (a pseudonym maka Joel na Itan Coen).
Iduzi na-edezi a nkiri na-eweta abụọ Filiks a otutu nso ọnụ maka Coen ụmụnna. Otu mfe iji ngwaahịa dị ka Final Cut Pro ana achi achi na ha nwere ike rụọ nkiri si kọrọ na iji usoro iheomume atụmatụ nke ngwaahịa. Nkiri a akara a ohere na-agakwuru maka Coen ụmụnna, bụ ndị were uru nke mma mkpebi DVCPRO HD n'ihi na ha ọnwụ usoro tụnyere mbụ fim ndị na-bee na DV mkpebi.
Dabere na a graphic akwụkwọ site Frank Miller, nke a bụ chepụtara echepụta na retelling nke Agha Termopylae - akụkụ nke Peasia agha. Eduzi Zack Snyder, ihe nkiri e filmed na a ibu-imposition chroma isi Usoro aka emepụtaghachi imagery nke mbụ atọ ọchị akwụkwọ. Edezi na nkiri bụ site William Hoy.
Weghara graphic akwụkwọ anya na obi na-adị nke na fim na ihe oyiyi, nchịkọta akụkọ Hoy eji a ọnụ ọgụgụ nke ndị isi Final Cut Pro atụmatụ dị ka ukpụhọde oyi akwa na-agakọ ụdịdị ike omimi na ọnọdụ. Na anya na obi na-adị nke ihe nkiri a otú dabere na mmetụta kere, nchịkọta akụkọ Hoy nọrọ a otutu oge arụ ụka ihe a na-kwukwara anya ka onye ọ bụla ogbugba na otú a ga-emetụtarịrị ogologo na continuity nke ọ bụla idaha.
9. Sky Captain na World nke Echi (2004)
Na nnukwu aha kpakpando (Gwyneth Paltrow na Jud Iwu), nke a bụ ihe ọhụrụ film na-eji dijitalụ artists wuo multi-yikwasịkwara 2D na 3D nsio maka ndụ edinam footage, na aka na-adọkpụ storyboards ịmepụtagharịa dị ka kọmputa na-eme 3D animatics. Critically ahụ nke ọma ma ọ bụghị ịtọ igbe ọrụ iritu.
Edezi na nkiri bụ site Sabrina Plisco.
Final Cut Pro karịsịa oké egwu ike a idaha n'etiti abụọ odide na gbara ke a anụ ahụ set (n'adịghị dijitalụ soundstage ka e ji mee ihe ndị ọzọ na ihe nkiri). Final Cut Pro kwere ka filmmakers ka kwụ n'ahịrị na animatics na ndụ onstage footage. Otu n'ime ihe ịma aka na ihe nkiri a bụ na ndị editọ nwere iji aka ekenye oge-Koodu ka onye ọ bụla na-- na Obere vidiyo mgbe ahụ sụgharịrị na ota ka ha nwee ike ga-eji na a Final Cut Pro SD workstation. Nke a na obibia E jikwa kee nna ukwu anya-akara ịkpụ. Ogbe anatara nke he mgbe ahụ dị n'ime Final Cut Pro.
10. Nzuzo Mountain (2003)
Nke a bụ ihe The Epic Civil Agha ejije dabeere na akwụkwọ site Charles Frazier. Starring Jude Iwu, Nicole Kidman, na Renee Zellweger nke a bụ critically acclaimed na rụrụ ezi uche nke ọma n'ụlọ igbe ọrụ.
The nkiri na-nominated maka ihe Academy Award maka Best edezi ka site nchịkọta akụkọ Walter Murch.
Nke a bụ n'ezie hụrụ ka ihe itunanya nkiri maka ojiji nke Final Cut Pro na Hollywood Movies. Ihe dum akwụkwọ e mepụtara nyochasịrị otú nchịkọta akụkọ Murch eji Final Cut Pro dezie nkiri na analysis ya mmetụta na-eme n'ọdịnihu sinima nwetara. Editor Murch na-ekwere na ojiji nke Final Cut Pro on nkiri a indirected emetụta kasịnụ okike pụta. Karịsịa, na ojiji nke DVD authoring ike na Final Cut Pro pụtara na edezi otu bụ ike anya na ihe onwunwe ọzọ mgbe, na-ekerịta ya na ihe ndị mmadụ, na-agbanwe agbanwe ụzọ ahụ ha na-ele anya na ụfọdụ Ebeonodu.
Mgbe Hollywood fim achọ edezi ngwaọrụ nke kasị elu iji, nso nke mmetụta na ị nwere ike nweta iji Final Cut Pro bụ nnukwu - nakwa dị ka ọkọlọtọ ripple, mpịakọta, ileghara, slide, sikrob, aguba agụba na oge remapping edit ọrụ, Final Cut Pro na-abịa na a nso nke video ikwu n'ụzọ na a nso nke video na ọdịyo nzacha na ga-gị film oru ngo na-esonụ larịị.
O doro anya na Final Cut Pro bụ maa now a kpakpando na edezi nke Hollywood fim, ọ bụ oge iji mee ka ọ a kpakpando edezi gị fim dị ka mma.
> Resource> FCP> Top 10 Famous Movies mere site Final Cut Pro